Lego Disney ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြခန်း
17 / 09 / 2021 17 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 249 Views စာ0မှတ်ချက် ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်, 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်, 71044 Disney ရထားနှင့်ဘူတာ, စင်ဒရဲလား၏ရဲတိုက်, Disney, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego Disney, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Master, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, ဥပဒေ, မှော်နိုင်ငံတော်, မစ်ကီမောက်စ်, reviews, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး, ဝေါ့ Disney ကမ္ဘာ့ဖလား
စျေးနှုန်း၏တစ်နည်းနည်းဖြင့်ဝင်လာသည် 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်, Lego ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် မင်းရဲ့အချစ်ကိုပြသဖို့အများကြီးပိုသုံးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးထားပါတယ် Disney ကမ္ဘာ့ဖလား။
ထိုစဉ်တွင် Lego Group သည်လက်ရှိ၌တူညီသောအရွယ်အစားမတူညီသောအရွယ်အစားများကိုစမ်းသပ်နေသည် ဗြိတိန်အတွက်အထူးရှေ့ပြေးအစီအစဉ်သိသာထင်ရှားသည်မှာ၎င်းသည်ရှေ့သို့ဆက်လက်သွားနေပြီးပိုမိုသေးငယ်သည့်ဗားရှင်းကိုယူဆောင်လာသည် 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် mass market သို့ ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်.
များစွာသက်သာသော ၀ င်ကြေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်ထင်ရဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်art အချိုး၊ လုပ်နိုင်သည် ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် ၎င်း၏မောင်နှမများအတွက်နေရာ (သို့) ဘတ်ဂျက်မရှိသော House of Mouse ပရိတ်သတ်များအတွက် Magic Kingdom ၏အရသာကိုအလုံအလောက်ဖြည့်ပေးပါ။
theme: Lego Disney အမည်သတ်မှတ်မည် - ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် ဖြန့်ချိ: အောက်တိုဘာလ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 30.99 / $ 34.99 / € 34.99 အပိုင်းပိုင်း: 567 အသေးစားပုံများ: 1
minutiae မှာအရမ်းလေးနက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်တဲ့သူကိုမေးပါ Lego သူတို့အကြိုက်ဆုံးပုံစံကဘာလဲအုတ်ခဲတွေ၊ သူတို့ကကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုညွှန်ပြလိမ့်မယ်။ LEGOLAND မှာတွေ့တဲ့ပန်းပုတွေ၊ Lego စတိုးဆိုင်များ; ပု Lego Star Wars Ultimate Collector Series ၏ကျယ်ပြန့်သောထောင်စုနှစ် Falcon နှင့် Star Destroyer သို့မဟုတ်ဖန်တီးထားသောကြီးမားကျယ်ပြန့်သောတည်ဆောက်မှုများ Lego MASTERS ပြိုင်ပွဲဝင်။
၎င်းသည်လုံးဝတရားမျှတသည်။ သို့သော်ထိုပုံစံများအားလုံးသည်အထင်ကြီးဖွယ်ကောင်းသောလက်ရာများဖြစ်သည် Lego artသေးငယ်အောင်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်တင်ပြသောထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများအတွက်ပြောစရာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Magic Kingdom's Cinderella Castle ကဲ့သို့သောအထင်ကရနေရာတစ်ခုကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်။ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောတစ်စုံတစ် ဦး ကိုပေးပါ၊ ၎င်းကိုစုတ်တံတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုသာခြယ်မှုန်းပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းဒီစကေးကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာပတ်ပတ်လည်ကိုထိန်းကျောင်းဖို့အခန်းအများကြီးမရှိဘူး Lego part ပျဉ်ချပ်။ ဒါပေမယ့်ဖန်တီးမှုရဖို့အခန်းအများကြီးရှိတယ်၊ အဲဒါကဒီဇိုင်နာတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတယ် ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် Walt ၏ဤသင်္ကေတကိုနားလည်ရန်လုပ်ဆောင်ပြီးပါပြီ Disney ကမ္ဘာ၏အရွယ်အစား၏တစ်စွန်းတစ်စ 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်.
p ။ ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်သူတို့ကကူညီပေးခဲ့တာပေါ့art palette သည်သဘာဝအားဖြင့် microscale တွင်အခြားအရာများထက်ရဲတိုက်များကိုပိုမိုငှားရမ်းသည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအုတ်များနှင့်ပန်းကန်များ၊ ကွန်ကရစ်များ၊ ကုန်းစောင်းများနှင့်နှင်းလျှောစီးတိုင်များ (ကျွန်ုပ်တို့ထံမှသင်ယူခဲ့သည့်အတိုင်း) ဟယ်ရီပေါ်တာ) ဤအရာအားလုံးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။ ဒါပေမယ့်မရိုးဖြောင့်တဲ့ p တွေရှိတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးart ဤနေရာတွင် သုံး၍ နည်းစနစ်များတည်ဆောက်ပါ၊ ၎င်းမှာဤနေရာဖြစ်သည် ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် တကယ်တောက်ပသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ရဲတိုက်၏အောက်ခြေသို့လေးထောင့်ပုံအရိုးစုလက်နက်များ သုံး၍ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဝင်ပေါက်ကိုရွှေတွန်သံလေးချောင်းဖြင့်စီတန်းထားသော်လည်းအံသြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ထိရောက်မှုရှိသော၊ ရွှေမှန်ပြောင်းများသည်ရဲတိုက်၏အချိုးမညီသောမျှော်စင်များစွာ၏ပြတင်းပေါက်များကိုပါးနပ်စွာကိုယ်စားပြုသည်။
ထိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်သည်နှစ်ထပ်တိုက်တာဝါတိုင်များသည်သူတို့၏အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းအတိအကျကိုမဖော်ပြသောကြောင့်၊ ဤအတိုင်းအတာတွင်အလျှော့အတင်းလုပ်ရမည့်ဥပမာကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ artistic လိုင်စင်သည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအဆောက်အအုံဖြစ်သည် Lego အုတ်များကိုခွင့်ပြုသည်။
စင်ဒရဲလား၏နှစ် ၇၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အတွက်စစ်မှန်သောရဲတိုက်ကိုယမန်နှစ်ကပြန်လည်ပုံဖော်ထားသောအရောင်ရွေးချယ်မှုများကိုအပြစ်တင်ခြင်းနှင့် Walt အတွက်အလှဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Disney ကမ္ဘာ့နှစ် ၅၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်။ ဆိုလိုသည် ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်အပြာရောင်နဲ့ရွှေတောက်တောက်တွေကသိပ်မလိုက်ဖက်ပါဘူး 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နက်ပြာရောင်နှင့်ဖျော့ဖျော့ကိုနှိုင်းယှဉ်သော်လည်း၎င်းသည် p အနည်းငယ်နှင့်တည်ဆောက်သောအခါသင်လိုချင်သောအရာဖြစ်သည်။arts.
ဤနေရာတွင်အစုံအလင်၏အလှအပသည်ပြီးပြည့်စုံတိကျမှုထက် ဦး စားပေးပိုကောင်းသောနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်၊ စစ်မှန်သောရဲတိုက်၏နှင်းဆီပန်းရောင်သည်ဤနေရာ၌အဖြူရောင်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုသိမ်မွေ့သည်၊ ပိုနီးစပ်သော link တစ်ခုကိုပေးသည် ) သူ့ရဲ့ပိုကြီးပြီးပိုကြီးလာတယ် Lego ပေါက်ဖော်။
၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် နောက်ထပ် link တစ်ခုရှိတယ် Lego အုပ်စု၏ပိုကျယ်ပြန့်သောအစုစု၊ ပုံစံတည်ဆောက်မှုပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကိုမြင်နိုင်ရန် (သို့) လက်လှမ်းမမှီနိုင်သောကြောင့်လျှို့ဝှက်ချက်များလည်းရှိသည်။ microfigures နှစ်ခုနှင့်တူညီသောပုံနှိပ်အကွက်တစ်ခု 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် ပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် 71044 Disney ရထားနှင့်ဘူတာ အလယ်ဗဟို spire ဖြင့်ဖုံးကွယ် ထား၍၊ အတွင်းပိုင်းသို့တည်ဆောက်ထားသည်။
အတွဲ၏ဤထိပ်တန်းအပိုင်းသည်အောက်ခြေမှအလွယ်တကူမခွာနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်အတွင်းပိုင်းသို့မြင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်စုံတွဲတစ်တွဲကိုဖယ်ရှားလိုလျှင်ပင်အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်ဟုခံစားရသည်။ ပထမဆုံးနောက်ဘက်ပတ်လည်ရှိတာဝါတိုင်များ ကျေးဇူးတင်သည်၊ စုစုပေါင်းတည်ဆောက်မှုမလိုအပ်သော်လည်း၊ အတွင်းပိုင်းသို့ချောင်းကြည့်ရန်ကောင်းသောအပိုင်းအစကိုဖယ်ထုတ်ရန်လိုသည်။
၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် minifigure တစ်ခုသာပါ ၀ င်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အတော်လေးကောင်းသည်။ သူ၏ tuxedo ရှိ Mickey Mouse ၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့် minifigure ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းတစ်ခု 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်မရ။ 'အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း' သည်စကားစုတစ်ခုအတွက်အလွန်ပြင်းထန်သောစကားလုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း Mickey ၌သူ၏ coattails များနှင့်သူ၏ခြေထောက်များတွင်အဖြူရောင်စက်ဝိုင်းများမရှိခြင်း။
သို့သော်လည်းသူ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုဆိုးသည့်အရာဘာမှမရှိပါ၊ ၎င်းသည်ကွဲပြားသည်၊ ၎င်းကို sm အထိထပ်ပေါင်းသည်art နှစ်စဉ်မေလစတုတ္ထအကြိမ်တည်ဆောက်မှုကဲ့သို့အခြားအဏုကြည့်မော်ဒယ်များသည် minifigures များကိုလုံး ၀ ချန်လှပ်ထားလေ့ရှိသည်။ မင်း Minnie ပျောက်နေတယ်လို့မင်းပြောနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဘယ်မှာဆုံးမှာလဲ။
စက္ကူပေါ်တွင်£ 567 / $ 30.99 / € 34.99 အတွက် ၅၆၇ ကျပ်သည်စျေးဆစ်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းဒီမှာ microscale နဲ့ဆောက်နေတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ အဲဒီအပိုင်းအစတွေအများစုကလုံးဝသေးငယ်ပြီးတစ်ချို့အချိန်တွေကတည်ဆောက်ချိန်နည်းနည်းဆန့်နေပေမဲ့ဒါကလက်ရှိစျေးနှုန်းရဲ့ညာဘက်နားမှာရှိနေတုန်းဘဲ။ ၎င်းသည်အလွန်စျေးကြီးသည်မဟုတ်၊ ရယ်စရာလည်းစျေးမကြီးပါ။
ဘယ်လောက်ပေးထားလဲ Lego အစုံများသည်နောင်တွင်အထူးလျှော့စျေးများနှင့်စျေးနှုန်းတူသော်လည်း၎င်းတို့အတွက်အမှန်တကယ်အပြုသဘောဆောင်သည် ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် - အထူးသဖြင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ LEGO.com နှင့် Lego စတိုး သီးသန့်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်မည်သို့မျှလျှော့စျေးကိုတွေ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သင်ကအဖော်လုပ်ပြီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်ဒီအခန်းရဲ့အဓိကအခန်းအတွက်ဘတ်ဂျက်ဒါမှမဟုတ်ဘတ်ဂျက်မရှိဘူး Lego Disney line-up (သို့) ၎င်းကိုလက်ခံသော microscale တည်ဆောက်မှု၌ပျော်မွေ့ချင်သည် artသေးငယ်လွန်းသောအဆောက်အ ဦး တည်ဆောက်ရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် လွယ်ကူသောအကြံပြုချက်တစ်ခုလိုခံစားရသည်။
တကယ်တော့ဒါဟာသက်သေပါပဲ Lego အဖွဲ့သည်၎င်းကိုလိုအပ်နေသော၎င်း၏ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာ၎င်းသည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်တူညီသောအရင်းအမြစ်မှတဆင့်များစွာပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဘတ်ဂျက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိသည်။
နက်ရှိုင်းသောအိတ်ကပ်များနှင့်နေရာနှင့် Mouse House သို့သူတို့၏ဆည်းကပ်မှုကိုပြသရန်ဆန္ဒရှိသူများအတွက် 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် ရည်ရွယ်ချက်သာဖြစ်သင့်သည်၊ သို့သော်သင်၏အိမ်ကိုအိမ်အဖြစ်သို့မပြောင်းနိုင်သော Magic Kingdom အပိုင်းအစတစ်ခုကိုအိမ်ပြန်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေလျှင်။ Disney ကမ္ဘာ့နတ်ကွန်း၊ ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် လုံးဝသွားရမည့်လမ်းဖြစ်သည်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Disney ရဲတိုက်ကြီးကိုအသေးသုံးပြီးငါတို့သုံးတယ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Disney ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်?
သင်စုစုပေါင်းတစ်နာရီလောက်အကြမ်းဖျင်းအားထားရလိမ့်မယ် ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကြာမြင့်သော်လည်းဤသေးငယ်သည့်အပိုင်းအစများအားလုံးသည်အတော်ပင်ရူးသွပ်သွားနိုင်သည်။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Disney ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်?
၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် နံပါတ်လေးအိတ်အစုံတွင် ၅၆၇ ကျပ်ပါဝင်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ချက်အရ ၂၀၁၆ ခုနှစ် 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက် အပိုင်းအစ 4,080 ပါဝင်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Disney ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်?
၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် အမြင့် ၂၁ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၁၄ စင်တီမီတာနှင့်အမြင့် ၁၃ စင်တီမီတာရှိသောကြောင့်၎င်းသည်မျှော်စင်ထက်ပိုမိုပြသရန်လွယ်ကူသောပုံစံဖြစ်သည် 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်.
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Disney ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်ကုန်ကျစရိတ်?
၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက် ယူကေတွင်ယူရို ၃၀.၉၉၊ အမေရိကန်၌ ၃၄.၉၉ ဒေါ်လာနှင့်ဥရောပ၌ ၃၄.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချသည်။ ၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည် 71040 အဆိုပါ Disney ရဲတိုက်.
← LEGO ကိုအရင်ကြည့်ပါ Batman ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler: Scarecrow Showdown
Lego Disney ၂.၀ Mini Disney ရဲတိုက်တွင်ဝှက်ထားသော Easter ကြက်ဥပါဝင်သည် →